चलचित्र ‘रुदाने’ को फस्ट लुक सार्वजनिक ,कस्तो बन्दै छ चलचित्र ?(पढ्नुहोस)::Nepal's Online News Portal
चलचित्र ‘रुदाने’ को फस्ट लुक सार्वजनिक ,कस्तो बन्दै छ चलचित्र ?(पढ्नुहोस)
असार ७, २०७४- थाहा दर्शनका अभियन्ता, राजनीतिज्ञ तथा दार्शनिक रुपचन्द्र विष्टको जीवनीमा आधारित चलचित्र ‘रुदाने’ को फस्ट लुक सार्वजनिक भएको छ । विष्टको १८ औं स्मृति दिवसको अवसरमा बुधबार चलचित्रको फस्ट लुक सार्वजनिक भएको हो ।
विष्टको जीवन र संघर्षलाई समेटेर चलचित्र तयार पारिएको निर्देशक अमितकिशोर सुवेदीले जानकारी दिए । सुवेदीले चार वर्ष विष्टको जीवन अध्ययन गरी चलचित्र बनाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । चलचित्र सुवेदी र विकास ढकालले संयुक्तरुपमा लेखेका हुन् ।
चलचित्रमा रुपचन्द्र विष्टको भूमिकामा कलाकार दिव्य देवले अभिनय गरेका छन् । यसबाहेक चलचित्रमा नम्रता श्रेष्ठ, रवि गिरि, सुभाष गजुरेल, अमर सुवेदीलगायत एकसय बढी कलाकारको अभिनय रहेको सुवेदीले जानकारी दिए ।
भारतीय छायांकार सान्ता राओले चलचित्र खिचेका हुन् । निमेष श्रेष्ठले सम्पादन गरेको चलचित्रमा जेशन कुावरको संगीत छ ।
चलचित्रको सुटिङ करिब सकिएको र यही वर्षको अन्त्यतिर चलचित्र सार्वजनिक गर्ने निर्देशक सुवेदीले जानकारी दिए ।